The 8 Njirimara nke a "V" ery Ezi Brand | Martech Zone
Monday, May 18, 2020 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
N'ihi na afọ m na-eji poo-poo echiche nke mbọn. Otu ìgwè ndị mmadụ na-emetụ aka na-arụ ụka banyere ụdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na njirimara dị m ka ihe nzuzu. Dị ka ọnụahịa nke ụlọ ọrụ ndị na-akpọ aha na-ana iri ma ọ bụ ọtụtụ narị puku dollar.
Nzụlite m dị na injinia. Naanị agba agba m lebara anya bụ waya ihe ọnụ. Ọrụ m bụ idozi ihe mebiri emebi wee mezie ya. Ezi uche na nchọpụta nsogbu bụ nkà m - m weere ndị ahụ na ahịa nchekwa data na n'ikpeazụ na weebụ. Nchịkọta bụ atụmatụ m ma ana m edozighachi azụ na nsogbu ndị na-egbochi ndị ahịa ịkwalite ọnụego mgbanwe ha.
N'ime afọ iri gara aga, agbanyeghị, nghọta m na ekele m nwere maka ụdị mgbanwe agbanweela nke ukwuu. Akụkụ nke esemokwu ahụ bụ na ka anyị na-echegharị n'ụzọ ezi uche dị na isi mmalite nke esemokwu ahụ - anyị na-ahụkarị oghere dị na mbọ ndị ọrụ nke ịntanetị. Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ nwere akara na olu siri ike, ọ dị ịtụnanya na ọ dịịrị anyị mfe ijide ọkụ ahụ, mepụta ụfọdụ ọdịnaya dị ịtụnanya, ma mee ka ọ rụọ ọrụ niile.
Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ agabigaghị na mmega ahụ, ọ na-ewute ya mgbe niile ịghọta etu ha si, otu esi eweta ha na ntanetị, yana otu esi emepe akara jikọtara ọnụ nke ndị mmadụ ga-amata ma tụkwasị obi. Mbọn bụ ntọala nke ọ bụla ahịa mbọ… Amaara m na ugbu a.
Ka m lere ndị ahịa ahụ anya nke ọma, Edere m ụdị njirimara 8 akọwapụtara m nke ọma. Maka ihe ọchị, achọrọ m okwu na leta “V” iji tụlee nke ọ bụla… na-atụ anya na ọ ga-adịrị m mfe icheta.
visual - Nke a bụ ihe ọtụtụ mmadụ chere na akara bụ. Ọ bụ akara, akara, agba, ederede, na ụdị nke ihe ngosi a na-ahụ anya na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa na ọrụ ya.
Voice - E wezụga ihe ngosi, ka anyị na-agagharị n’ime atụmatụ maka ọdịnaya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọ dị anyị mkpa ịmatakwu olu nke ụdị. Nke ahụ bụ, gịnị bụ ozi anyị na kedu ka anyị si agagharị ya ka ndị mmadụ ghọta onye anyị bụ.
Udochukwu - Akara anaghị anọchite anya ụlọ ọrụ naanị - ọ na - emekwa ka mmekọrịta dị n'etiti onye ahịa. Onye ka ị na-efe? Nke ahụ ọ na-egosi na ihe anya gị na olu gị? Dịka ọmụmaatụ, Coke nwere ọdịdị oge ochie na olu obi ụtọ. Ma Red Bull na-agbanyekwu ma na-elekwasị anya na ndị na-ege ya ntị nke egwuregwu egwuregwu siri ike.
Obodo - Ole ndị bụ ndị asọmpi gbara gị gburugburu? Kedu ụlọ ọrụ ị nọ? Imirikiti ụlọ ọrụ na-eje ozi n'otu ụlọ ọrụ akọwapụtara ma na -emepụta ma nke ọma ma yana ụlọ ọrụ ahụ dị ezigbo mkpa. Enwere ndị ọgba aghara, n'ezie… mana maka ọtụtụ akụkụ, ịchọrọ iyi ndị kwesiri ntụkwasị obi na ndị ọgbọ gị.
mgbanwe - Ma ebe ọ bụ na ị chọghị ịdị ka ibe gị, ị ga-esi a differeaa dị iche na ha? Kedu ihe bụ nke gị Amụma Bara Uru Pụrụ Iche? Ihe aghaghi iputa ihe n’ile nke n’eme ka gi na ndi oso la.
Omume ọma - O zughi ezu n’oge ugbua ka ị ga - abụ nnukwu ihe ị na - eme, ị ga - enwerịrị ụfọdụ ezigbo mma ma ọ bụ ngwongwo metụtara na ụdị gị. Ikekwe ọ bụ ihe dị mfe dịka ịkwụwa aka ọtọ - ma ọ bụ gbagwojuru anya otu esi enyere ndị obodo aka. Ndị mmadụ chọrọ ịzụ ahịa na ndị mmadụ na-emetụta mgbanwe - ọ bụghị naanị ịkpa ego.
uru - Gini mere o ji baa uru ịkwụ gị ụgwọ maka ngwa ahịa ma ọ bụ aka ọrụ gị? Ihe niile gbasara ika gị ga-emerịrị ka uru ọrụ gị bara karịa ego ọ ga-efu. Ndị a nwere ike ịbụ mmụba nke arụmọrụ, iwulite nnukwu mkpa, belata ụgwọ, ma ọ bụ ọtụtụ ihe. Ma akara gị kwesịrị igosipụta uru ị na-ewetara ndị ahịa gị.
Ugha - Kedu okwu dị jụụ, eh? Kedu ihe ụlọ ọrụ gị nwere mmasị na ya? Mmasị kwesịrị ịbụ ihe nzuzo nzuzo na usoro ntinye aha ọ bụla n'ihi na oke iwe na-efe efe. Mmasị bụ mmetụta nke na-ekpochapụ ndị mmadụ n'ụkwụ ha. Kedu ka akara gị si egosi mmasi gị?
Buru n'uche, Adịghị m a branding ọkachamara… ma anyị bulie ebe mbupute ọkachamara na-ahapụ ma na ọ hụrụ na ọ bụ nnọọ mfe ka troubleshoot mbipụta jupụta ọdịnaya voids mgbe anyị na-aghọta, nwere ike dakọtara, na ikwughachi a ụlọ ọrụ ika.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgụkwu banyere mbọn, aga m akwado akwụkwọ Josh Mile - Obi ike Brand. Ọ meghere anya m nye ụfọdụ isi okwu anyị na ụfọdụ ndị ahịa na-agbasi mgba ike na mbọ ndị ọzọ anyị na-arụ n'ime.
Ana m enweta ya ugbu a.
Tags: ika ikambọnụlọ ọrụurumgbanwemmerina-ere ahịagburugburuomume ọmaakara ngosiolu nke ika